Budata Advanced SystemCare maka Windows
Free Budata maka Windows (48.00 MB)
Budata Advanced SystemCare,
Site na nbudata Advanced SystemCare, ị ga - enwe usoro njikarịcha sistemụ nke so na mmemme kachasị aga nke ọma na mmezi kọmputa yana osooso kọmputa.
Olee otú Wụnye Advanced SystemCare?
Advanced SystemCare, nke bụ sọftụwia ị nwere ike ibudata wee malite iji nefu na kọmputa gị, bụ usoro njikarịcha sistemụ nke nwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche bara uru ị nwere ike iji tụte kọmpụta gị, nke bidoro rụọ ọrụ nwayọ nwayọ oge, mgbe iji ya nwa oge ma weghachite ya na steeti ụbọchị mbụ ya. Advanced SystemCare na-enyere gị aka ịrụ arụmọrụ dị mgbagwoju anya na ịrụ ọrụ njikarịcha na ntanetị ole na ole.
Nime ngwaọrụ mmezi na njikarịcha na Advanced SystemCare bụ ngwaọrụ ndị na-enyere aka idozi njehie ndekọ na ihicha faịlụ junk. Njehie ndị dị otú a na faịlụ ndị na-enweghị isi na-eme ka sistemụ arụmọrụ gị mepee ma mechie noge na-adịghị anya, kọmputa gị wee meghachi iwu noge. Na Advanced SystemCare, ị nwekwara ike igosi diskila diski na ndekọ defragmentation. Nụzọ dị otú a, arụmọrụ diski gị na-abawanye.
Olee otú adị nelu kọmputa na Advanced SystemCare?
AdvancedCareCare na-enye ndị ọrụ ohere iwere usoro nchekwa ewepu na ịmalite Windows mmalite na ịgbalite ọrụ Windows. Nchọgharị ihe nchọgharị na Advanced SystemCare na-enye ihe ngwọta maka iwepu nkwụnye ihe nchọgharị na igbochi mgbanwe mgbanwe homepage. Ọ bụrụ na gị na ihe nchọgharị weghaara site na achọghị 3 ọzọ software na tinye-ons, ị nwere ike ime ka ojiji nke ndị a ngwaọrụ na ịrụ homepage nnọchi. Di elu SystemCare na-enyocha ihe nchọgharị gị mgbe niile ma gbochie mgbanwe ngbanwe nke homepage gị na ndabara ọchụchọ engine.
Na AdvancedCare, ị nwere ike wepu ihe nchọgharị gị na ntanetị. Can nwere ike hazi usoro ihe omume na-akpaghị aka ihichapụ nzuzo metụtara mgbe gị internet nchọgharị na-emechi.
Advanced SystemCare gụnyekwara ngalaba Ngwá Ọrụ nke na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ngwaọrụ ndị ọzọ bara uru nke IObit mepụtara. Ngalaba Turbo Power na Advanced SystemCare na-enye gị ohere ịbawanye arụmọrụ nke kọmputa gị na egwuregwu ma ọ bụ ngwa dịka mkpa gị. Ngwaọrụ a na-enyocha ọrụ sistemụ yana ọrụ ndị ọzọ nke 3 na Windows, na-agwụ ndị na-adịghị mkpa ma na-enyekwu akụrụngwa na ngwa ma ọ bụ egwuregwu ị na-arụ ọrụ. Ya mere, egwuregwu na ngwa ndị a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egbochi arụmọrụ arụmọrụ.
Gịnị bụ New na Advanced SystemCare 13
Nchedo Email (Ọhụrụ): Na-egbochi njikọ ọjọọ na weebụsaịtị na email gị maka Gmail, Outlook na Yahoo Mail na Internet Explorer, Firefox, Chrome na Edge.
Mbido: (Mma) Gbanyụọ ihe ndị ọzọ na mmalite yana nchekwa data kachasị ọhụrụ.
Sọftụwia ihe ngwanrọ (emelitere): pasent 60 karịa mmemme ọhụrụ na-akwado mmelite dị mfe.
Gbochie Mmemme Na-adighi Nchedo (Emeziwanye): Nkwado igbochi mmemme site na aha ụlọ ọrụ
Nkwado asụsụ English.
Nkecha na bara uru interface.
Ọ na-enye ngwaọrụ dị ike maka njikarịcha sistemụ.
Advanced SystemCare Ụdịdị
Nha faịlụ: 48.00 MB
Kacha ọhụrụ na: 03-07-2021
Instrumentul de reparare a computerului (Outbyte PC Repair) este un program de curățare, accelerare...
Rufus bụ obere ihe, dị mfe iji na mmemme nefu na-enyere gị aka ịmepụta diski USB diski. Oge ụfọdụ...
Registry Finder bụ mmemme ndekọ nefu, dị mfe ma baa uru ewepụtara maka abamuru nke ndị ọrụ kọmputa....
Mmemme HWiNFO64 bụ mmemme ozi sistemụ na -enye gị ohere ịnweta ozi zuru oke gbasara akụrụngwa na...
CPUCores :: Mee ka FPS gị dị elu bụ mmemme ngwangwa egwuregwu nke nwere ike idozi nsogbu gị ma ọ...
CPUBalance bụ obere ngwanrọ dị irè. Site na mmemme na -egbochi mmemme na -arụ ọrụ na sistemụ...
EaseUS Sistemu GoBack efu bụ mmemme ndabere sistemụ efu nke ị nwere ike iji gbanwee ma weghachite...
CPU-Z bụ ngwa ọrụ sistemụ na - enye gị ozi zuru oke gbasara igwe nhazi kọmputa gị, bọọdụ na ebe...
IObit SysInfo bu ihe omuma ihe omuma nke eji enyere gi aka. Ọ na-enye gị nkọwa zuru ezu banyere isi...
Nnyocha Ahụike PC bụ ngwa dị mkpa iji chọpụta ma kọmputa gị ọ dị mma maka Windows 11 kwalite tupu...
EZ Egwuregwu Egwuregwu bụ mmemme kọmputa na-enyere gị aka igwu egwuregwu nke ọma site na ịbawanye...
Mmemme Wise Care 365 bụ mmemme na -arụzi mmezi iji mee ntọala ndekọ kọmputa gị, diski na ngwaọrụ...
A free usoro mmezi ngwá ọrụ na-enye gị ohere nụzọ dị mfe ịrụ ndị dị mkpa njikarịcha Filiks mgbe a...
Total PC Cleaner bụ a free omume na ị nwere ike iji mee ka gị na kọmputa dị ọcha na adị nelu. Obere...
PCBoost bụ mmemme ngwangwa na -enye gị ohere ịme mmemme na egwuregwu na arụmọrụ dị elu. Ọ bụrụ na...
WhyNotWin11 bụ obere ngwa dị mfe ị nwere ike ịchọpụta ma kọmputa gị ga-emezu ihe sistemụ chọrọ iji...
Registry Reviver bụ mmemme nke ị nwere ike i scanomi ndekọ Windows, dozie njehie ma bulie ya....
Mmemme StressMyPC bụ mmemme bara uru ị nwere ike tụọ etu sistemụ gị siri kwụsie ike site na ịmanye...
Advanced SystemCare Ultimate bụ ike na-apụta ìhè PC nche na arụmọrụ ngwá ọrụ. Ọ na - enye gị ohere...
Ashampoo Registry Cleaner bụ windo ndekọ Windows. Ndebanye aha Cleaner na-eme ka gị na kọmputa ngwa...
PC Booster Plus bụ usoro osooso ngwa ị nwere ike iji na kọmputa gị. Na ngwa, nke dị mfe iji, ị...
Noge a, mgbe teknụzụ na -eto nike nike, amalitela imepụta kọmpụta na -enweghị draịva CD/DVD. Oge...
PC Win Booster bụ ihe ịga nke ọma usoro mmezi ngwá ọrụ nke na-enyocha kọmputa gị, na-edozi nsogbu ọ...
Avast Driver Updater bụ usoro mmelite ọkwọ ụgbọala akpaka maka kọmputa Windows. Site na iji otu...